उपचारमा अाउँदैनन् एचअाईभी संक्रमित – Himalaya TV
Home » समाचार » उपचारमा अाउँदैनन् एचअाईभी संक्रमित
उपचारमा अाउँदैनन् एचअाईभी संक्रमित
१६ मंसिर २०७५, आईतवार १३:२४
कमला गुरुङ/काठमाण्डौ, १६ मंसिर ।
एचआईभीको जाँच गराऔँ, आफ्नो अवस्था थाहा पाऔं भन्ने नाराका साथ यस वर्ष पनि विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ । बर्षेनी मनाइने यस्तो दिवस सरकारी कार्यालय तथा सडकमा त देखिन्छ तर संक्रमितसम्म भने कमै पुग्छ ।
सरकारले विश्व एड्स दिवस मनाउन थालेको तीन दशक नाघ्यो । जतिसुकै दिवस र कार्यक्रम गरेपनि अझै पनि एचआईभी संक्रमित खुल्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छैन। यसको उदाहरण आधा जति एचआईभी संक्रमित उपचारमा नआउनु हो । नेपालमा ३१ हजार २० जना एचआईभी संक्रमित रहेको सरकारको अनुमानित तथ्यांक छ । तर आधा जति संक्रमित अझै पनि उपचारमा आएका छैनन् ।
“यसकाे विभिन्न कारण छन्”, राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. तारानाथ पाेख्रेलले भने, ” उनीहरू खुलेर अाएर जाँच नगराउनु हाे । जाँच गराएपछि मात्र उनीहरूकाे अवस्था थाहा हुने हाे । साथै उनीहरूलाई मैले जाँच गराउनुपर्छ भनेर चेतना नहुन पनि सक्छ । तर केही भने थाहा हुँदा हुँदै पनि लुकाएर बसेका पनि छन् ।”
सन् २०२० सम्ममा ९० प्रतिशत संक्रमितलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य भएकाले हाल सन्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न अावश्यक रहेकाे डा. पाेख्ररेलकाे भनाइ छ । नेपालमा एचअाईभी तथा एड्स सम्बन्धी क्रियाकलापहरू राष्ट्रिय एचअाईभी रणनीतिक याेजना २०१६-२०२१ काे निर्देश अनुसार सन्चालित रहेकाे पाेख्ररेलले जानकारी दिए ।
संक्रमित मध्ये ५३ प्रतिशत मात्र एन्टिरेट्रो भाइरल थेरापी उपचारमा छन् । एचआइभीको लक्षण वर्षौसम्म देखा पर्दैन । तर समयमै परीक्षण गरे संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन सकिने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा राेग अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट डा. अनुप बास्ताेलाले बताए ।
बास्ताेला भन्छन्, ” एचआईभी संक्रमण भएको थाहा पाउनै बित्तिकै एआरटी उपचार सुरु गरे सामान्य व्यक्ति सरह जीवनयापन गर्न सकिन्छ । ” उनका अनुसार १ हजार ९ सय २० संक्रमितले नियमित रूपमा एअारटी सेवा लिइरहेका छन् । अाैषधि बीचमै नछाेड्न तथा नियमित रूपमा खान डा. बास्ताेलाकाे सुझाव छ ।
असुरक्षित याैनसम्पर्क एचअाईभीकाे सर्नुकाे मुख्य कारण हाे । सुईद्धारा लागूपदार्थ प्रयाेग गर्ने, पुरुष समलिंगी तथा तेस्राेलिंगी, राेजगारीका लागि विदेशिनेहरू पनि यसकाे उच्च जाेखिममा हुन्छन् ।
नेपालमा नयाँ एचआईभी संक्रमणको दर ६१ प्रतिशतले घटेको सरकारी तथ्यांक छ । तर पहिचान भएका पनि सामाजिक तिरस्कारको डरले एचआईभी लुकाउन बाध्य छन् । त्यसैले संक्रमित खुलरै उपचारमा आउने वातावरण नबनेसम्म ९० प्रतिशत संक्रमितलाई उपचारको पहुँचमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य प्राप्ति चुनौतिपूर्ण बनिरहने छ ।